माला फाल्दै गए अयोग्य लडाकु | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
Posted on फ्रेवुअरी 10, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
दहवन (रोल्पा), माघ २६ – बिदाइ गर्न आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाइदिएको माला शिविर छाड्नु परेका अयोग्य लडाकुले फालिदिए । दाहालले हात अघि बढाउँदासमेत कतिपयले त हात मिलाएनन् । घर फर्किन लागेका लडाकुको बिदाइ कार्यक्रममा सोमबार विदेशी पाहुनासँगै दाहाल पनि दहवन आएका थिए । स्वागतमा न उत्साह देखियो न त भाषणमा ताली । बरु उनीहरू असन्तुष्ट देखिन्थे बाहिरिनुपर्दा । घर फर्केपछि पनि पार्टीले खटाएको काम गर्नुपर्ने उर्दीपछि उनीहरू झन् निराश देखिएका थिए ।
‘घर फर्केपछि कुन पार्टीमा काम गर्ने हाम्रो खुसीको कुरा हो,’ दाङको चैलाही-९, नारायणपुरका सरद वलीले भने । अस्थायी शिविरबाट बाहिरिएका उनीहरूलाई पार्टीमा लाग्नै पर्ने उर्दीसहित कार्यक्षेत्र तोकेर पठाइएकामा धेरै रुस्ट देखिन्थे ।
माओवादी सैन्य कमान्डरहरूले बिदाइ गर्नुअघि प्रशिक्षण दिँदै एक महिनाभित्र पार्टीका काममा फर्किन निर्देशन दिएका थिए । उनीहरूलाई वाईसीएल लगायतका पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठनमा रहेर काम गर्न भनिएको छ । ‘एक महिनापछि दिइएको जिम्मेवारीमा फर्किनुहोला,’ ती नेताका भनाइ उद्धृत गर्दै रुकुमकी एक लडाकुले भनिन्, ‘नफर्किए खोज्दै आउँछौं ।’ घर गाउँको नक्सा र फोन नम्बरसमेत टिपेर राखेको उनले बताइन् । प्यूठानका दिलीप घर्ती मगरले युद्धमा लगाएका युवालाई पुनःस्थापनमा बेवास्ता गरिए जेसुकै हुनसक्ने चेतावनी दिए ।
उनको पाँचौ डिभिजनभित्र भने दाहालको भव्य स्वागत गरियो । माओवादी सेनाले उनलाई सलामी दिएको थियो । त्यहाँ उनलाई विगतमा झैं ‘कमरेड’ सम्बोधन गरिएन, ‘सर’ भनियो । सलामीपछि पत्रकारहरूलाई बाहिर पठाएर अध्यक्ष दाहाल लगायतका माओवादी नेताहरूले शिविरको निरीक्षण गरे । उनले त्यहाँ डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम ‘विविध’ सहितका सैन्य कमान्डरहरूलाई भेटेर गोप्य बैठक गरे । रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित विविध औपचारिक कार्यक्रममा भने देखिएनन् ।
एक महिनायता सातवटा शिविरका २ हजार ३ सय ९४ अयोग्य लडाकु बाहिरिइसकेका छन्। अनमिनले २ हजार ९ सय ७३ लाई नाबालिग र एक हजार ३५ जनालाई युद्धविरामपछि भर्ना भएको भन्दै अयोग्य ठहर्‍याएको हो । माओवादी सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङले शरीरमा गोली र छर्रा लिएका लडाकुलाई समेत बिदाइ गर्नुपर्दा दुःख लागेको बताए ।
राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद राष्ट्रका तर्फबाट बेलायती राजदूत एन्डुय्रु हलले अयोग्य लडाकु हटाउन राजी भएर माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताए । घर फर्किन लागेका अयोग्य लडाकुलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यो तपाईंको जीवनको नयाँ सुरुवात हो ।’ अझै १९ हजार ६ सय माओवादी लडाकुको भविष्य निर्धारण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै एन्ड्यु्रले भने, ‘लडाकुको पुनःस्थापन, व्यवस्थापन र समायोजन हेर्न हामी आतुर छौं । त्यसपछि मात्र नेपाली समाजको नयाँ पाटो सुरु हुनेछ।’ ओवादीको पछिल्लो भूमिकाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे । माओवादीकै कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधानको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बने फाइदा माओवादीलाई पुग्ने ठानेर रोक्न खोज्नेहरू पनि छन् । त्यसैले जुनसुकै त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ ।’
« जमिम हत्याको बिदेशमा रहेका संचार संस्थाद्वारा पनि भर्त्सना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनौतीमा »